Malunga Nathi-Qingdao Yingzhicai Packaging Co.Ltd
Sineminyaka engaphezu kwama-20 yamavaukuvelisa iingxowa zokupakisha zeplastiki
IQingdao Yingzhicai Packaging Co.Ltd, ekwisiXeko saseQingdao, kwiPhondo laseShandong, eyasekwa ngo-1996, igubungela i-9800 square metres, igxile ekuveliseni iingxowa zokupakisha zeplastiki, iingxowa ze-spout, itywina elinamacala amathathu, iingxowa ze-aluminiyam, iingxowa zefoyile ye-aluminiyam, i-stereo (ukwakho). -inkxaso) iibhegi, iingxowa ezimilise okwezodwa, ezidibanisa nokuvuthela ifilim.ukuprinta, ukuqamba, ukuvelisa iingxowa, kunye neemveliso ezisetyenziswa ngokubanzi kumashishini afana nobisi, isiselo, ukutya, i-condiment, izinto zokuthambisa, imveliso yokuhlamba.
Nesatifikethi sokuprinta kunye nekhowudi yokuprinta isatifikethi.
Inkampani inenkqubo yolawulo lomgangatho ogqibeleleyo nevakalayo
Ipase i-IsO9001-2008 kunye ne-QS yoKhuseleko lweMveliso yoKutya kweSatifikethi
"Umgangatho bubomi, iiNzuzo zifumaneka kulawulo"
I-Qingdao Yingzhicai Packaging Co.Ltd igxininisa kumgaqo-nkqubo othi "ukulunga bubomi, izibonelelo ezifumaneka kulawulo", ngokunyaniseka, amandla kunye nomgangatho wemveliso onconywa kakhulu ngabathengi kushishino.
Kukho amagcisa kunye nabasebenzi be-Qs abanamava atyebileyo, abakwaziyo ukuqinisekisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokubalwa kweemfuno zabathengi ngokulawula imathiriyeli, ukujonga, inkqubo, iimveliso ezigqityiweyo kunye nokuhanjiswa.
Iqela lobuGcisa elinamandla
Inkampani iseke inkqubo yenkonzo yabathengi esebenzayo negqibeleleyo, kwaye ibonelela ngeenkonzo ezihlanganisiweyo kubandakanya ukubonisana nobugcisa, umfuziselo wemveliso, uyilo lobuchwephesha kunye nesikhokelo sokupakishwa.
Bonke abasebenzi benkampani bazimisele ukusebenzisana nabathengi basekhaya nakwamanye amazwe ngesimo sethu sengqondo esifudumeleyo nesinyanisekileyo, iindlela zobuchwephesha kunye neenkonzo ezigqwesileyo.
Zama ukwenza inkonzo engcono kubathengi
Iinkcukacha zichaza impumelelo okanye ukungaphumeleli
Ukhetho lwenza ikamva
1.NguMnu.John Magel eJamani,Ishishini elide kunye neQingdao Yingzhicai Package.my iqela lityelele umzi-mveliso wabo liqhuba iodolo yam.ewe, bangumzi-mveliso wobungcali.kumnandi ukuthetha nabo.Ndenze ishishini amaxesha amaninzi ngoku ndonwabile soloko ufumana iimpahla ezisemgangathweni kunye neenkonzo ezintle.
2.NgoMnu.Abe Romana USA, Njengommi waseMelika owenza ishishini e-China umba wokuqala endandinexhala yayikunxibelelwano njengoko loo mqobo unokukhathazeka kakhulu ukujongana neqela lokuthengisa liye laphikisana.
3.Ron Matt USA,Iingxowa zepouch kunye noomatshini bafikile namhlanje,Zonke zikhangeleka zilungile kwaye zizifaka enkonzweni,Ibhegi yesingxobo ibonakala ilungile kakhulu,kwaye oomatshini bakwimeko entle kakhulu,Yixabise inkonzo yakho yobungcali.
4.NguNkskz, uJulian Paterson Australia, bekumnandi ngenene ukutyelela eChina okokuqala, ndiyasithanda isixeko, iQingdao, intle kakhulu. Ishedyuli yam kwesi sixeko kukutyelela umthengisi wam iYingzhicai Package.